Vlachatika, Corfu, Greece
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguEasyVillas
KUBALULEKILEYO: Ukusabela kwi-COVID-19, le ndawo yandisiwe yokucoca kunye nemilinganiselo yokubulala iintsholongwane kunye nemigaqo yokuqinisekisa ukhuseleko lweendwendwe zethu.
Kwilali yeposi-khadi yasePorta, kunxweme olufunwayo olusemantla-mpuma eCorfu, kukho iVila Socrates entsha: indawo enamagumbi okulala ama-3 kunye nephuli yabucala enikezela ngeyona ndlela intle yeeholide ebulela ubungaphakathi bayo obunesitayile, imbonakalo yolwandle ephefumlayo. kunye nengqalelo kwiinkcukacha.
Kwilali yeposi-khadi yasePorta, kunxweme olufunwayo olusemantla-mpuma eCorfu, kukho iVila Socrates entsha: indawo enamagumbi okulala ama-3 kunye nephuli yabucala enikezela ngeyona ndlela intle yeeholide ebulela ubungaphakathi bayo obunesitayile, imbonakalo yolwandle ephefumlayo. kunye nengqalelo kwiinkcukacha. Ifakwe kweyona ndawo iphezulu yesiqithi, kodwa ibonelela ngexabiso elingakholelekiyo lemali, iVilla Socrates kukumgama nje omfutshane ukusuka kwiilwandle ezimangalisayo, ii-taverna ezibalaseleyo kunye neelali ezintle. I-villa yakhiwe ngokutsha (ukuqala kwi-cottage yamatye endala) ekupheleni kuka-2019.
Ngaphakathi, i-villa ibekwe kumgangatho omnye kwaye igqitywe ngokumnandi kwisitayile saseCorfiot, ngaphandle kokulibala ezona ntuthuzelo zangoku kunye nezinto eziluncedo. Kukho indawo enkulu yokuphumla eneplani evulekileyo (ibhedi yesofa yondwendwe lwe-7 ekhoyo) enesitayile, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (kubandakanya ifriji/ifriji, i-oveni, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba). Iingcango zePatio zikhokelela ngqo kwi-pool terrace kunye nendawo yokutyela yangaphandle. Kukho amagumbi okulala ama-3 abanzi (ama-2 aphindwe kabini – amawele a-1), onke ane-air-conditioning (afumaneka simahla 24/7) anikwe kowona mgangatho uphezulu kwaye abonelelwe ngebhedi ephezulu yoluhlu. Elinye lamagumbi okulala amabini libonelelwe ngegumbi lokuhlambela elikhulu leen-suite ngelixa amagumbi amabini aseleyo abelana ngegumbi lokuhlambela losapho. Ukuthathela ingqalelo kwiinkcukacha kunye nophando olunyamekileyo lwezithethe zasekhaya zaseCorfiot ngamagama aphambili kule villa intle!
Ukuba iindawo zangaphakathi zeVilla Socrates zinomtsalane, ingaphandle ibalasele ngokwenene! Ichibi elikhulu labucala, elijikelezwe ngamathafa amahle agangathiweyo kunye nohlaza, lixhotyiswe ngee-sunbeds ezisi-7 kunye neeparasols. Ilinganisa i-6.5m x 4.5m kwaye ubunzulu yi-1.6m. Iindwendwe ziya kuba nethuba lokonwabela ukutya okumnandi okuqhotyiswe yibarbecue, okanye ukutya ial-fresco ukonwabela impepho yalapha ekhaya. Indlu kunye nendawo ye-pool inikezela ubumfihlo obupheleleyo kwiindwendwe, ukutsala iiyure ezinde zelanga. Iimbono zokufa: iindwendwe ziyakwazi ukubona idolophu yaseCorfu ngaphesheya koLwandle lwe-Ionian ukuya emazantsi, iAlps yase-Albania kunye ne-Greek landland ngaphesheya ekuphumeni kwelanga kunye nokunyuka kuLwandle lwe-Adriatic ukuya e-Italy, ukuya emantla. Enkosi kwiindawo ezibanzi. ezikhoyo ngaphandle, iiklasi ze-yoga zinokulungiswa ngabasebenzi bethu abanamava. Indawo yokupaka yabucala yeemoto ezi-2 iyafumaneka.
Ilali yasePorta, apho iVilla Socrates ikhona, ihleli iyindawo yemveli enabahlali abamalunga ne-107. Ilali "kafenion" yindawo yokumisa umngxuma wemveli kubahlali bendawo, abelusi beentaba kunye nabahambi abavela kwihlabathi liphela. Iimbono zeStraits of Corfu bellow zizodwa kunye namathambeka anomtsalane asempuma eMount Pantokratoras enyuka nje phezu kwelali.
Umbuki zindwendwe ngu- EasyVillas
Izimvo eziyi-1 918
Inombolo yomthetho: eotlicensesept2019
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vlachatika